bone – Healthy Life Journal
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ရောဂါများ (Bone Marrow Diseases)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်တော့ နာမည်က (—) ပါ။ အသက်က ၃၀ပါ။ လက်ရှိ(—)မှာနေပါတယ်။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်း စုံလင်စွာသိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီဆိုတာ အရိုးထဲကအရိုးပွကို ခေါ်တယ်။ အရိုးတိုင်းမှာတော့မရှိပါ။ Sternum ရင်ညွန့်ရိုး၊ Pelvis တင်ပါးဆုံရိုး၊ Femur...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ လက်ချောင်းလေးတွေ ကျိုးရင် စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ လက်ချောင်းလေးတွေ ကျိုးရင် စိုးရိမ်ရပါတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေက သိပ်ကို ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ လက်မပဲ ကွေးကွေး၊ လက်ညှိုးပဲ ကွေးကွေး.....
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ထိုင်တဲ့အခါ၊ မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါနဲ့ လဲလျောင်းတဲ့အခါတွေမှာ မြီးညောင်ရိုး နာကျင်ကိုက်ခဲနေပါသလား။ မြီးညောင်ရိုးကိုက်ခဲနာကျင်တာက ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်အတွင်း ဒါမှမဟုတ် လပိုင်းအတွင်း အလိုလိုသက်သာပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ ချော်လဲတာ၊ ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်ထဲမှာ အကြာကြီးထိုင်ရတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့် မြီးညောင်ရိုးနာကျင်ကိုက်ခဲမှု...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ကျောရိုးအဆစ်တွေ ရောင်ရမ်းတာက ဘယ်အသက်အရွယ်မှာ အဖြစ်များတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဒီရောဂါက အသက် ၂၀ နဲ့ ၃၀ နှစ်ကြားမှာ စဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက တဖြည်းဖြည်းပို ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။ ရောဂါကြွနေရင်...
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အရိုးပျော့ရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. အရိုးပျော့ရောဂါကို ဆေးပညာအရ Osteomalacia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ Osteo ဆိုတာကအရိုးပေါ့၊ Malacia ဆိုတာက ပျော့တာကိုပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်တချို့ကတော့ Softening...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အချိန်သုံးစက္ကန့်လျှင် လူတစ်ဦးနှုန်း အရိုးပွ/အရိုးပါးရောဂါကြောင့်အရိုးကျိုးနေကြောင်း မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးမှ ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုက ပြောသည်။ “အရိုးပွ၊ အရိုးပါးရောဂါဆိုတာ အရိုးတွေ တဖြည်းဖြည်းပွလာပြီး အရိုးမှာ အခေါင်းပေါက်တွေဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးရဲ့ သိပ်သည်းဆ ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းတဲ့...
သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းသည့်အတွက် အရိုးပျက်စီးခြင်း(Avascular necrosis)
ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ AVN (Avascular necrosis) အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ ။ Avascular necrosis ဆိုတာက အရိုးကို သွေးလှည့်ပတ်မှု မကောင်းတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် အရိုးတွေ ပျက်စီးကုန်တာကိုပြောတာပါ။ ၁၈၈၈...
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရိုးတွေက အလွန်အမင်းအားနည်းပြီး ကြွပ်ဆတ်လာတဲ့ အခြေအနေကို အရိုးပါးရောဂါ ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ကုသမှုမခံယူရင် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။အရိုးပါးရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကို သိနားလည်ပြီး အရိုးကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့- တစ်နေ့တာ အစားအသောက်ထဲမှာ နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ဒိန်ခဲတို့လို...
ဒီဇငျဘာ လ၊ 2019 ခုနှဈ